Ungarekhoda njani ukusebenza ngeGoogle Fit | I-Androidsis
IGoogle Fit sisicelo esenziwe yinkampani sabasebenzisi kwi-Android kunye ne-Wear OS. Enkosi kuyo, uya kuba nakho ukugcina ulawulo oluchanekileyo kwimisebenzi yakho yomzimba kwaye urekhode konke ukuzilolonga okwenzileyo. Sisicelo esiguquke kakhulu ngokuhamba kwexesha, sishiya nemisebenzi emitsha kunye noyilo olutsha.
Enye yeenzuzo zeGoogle Fit kukuba Isivumela ukuba sirekhode zonke iintlobo zoqeqesho. Ke nokuba senza ntoni emzimbeni, sinokuyisebenzisa ngaphandle kwengxaki. Kwaye sikubonisa indlela yokubhalisa iseshoni yoqeqesho.
Le rekhodi yokuzilolonga yinto Singazenza zombini kwifowuni yethu ye-Android, kunye nokubukela nge-Wear OS. Iya kuxhomekeka kwisixhobo onaso. Nangona amanyathelo alula kuzo zombini iimeko. Sikuxelela ngakumbi ngazo:
1 Rekhoda ukuzilolonga kwi-Android
2 Rekhoda ukuzilolonga kwi-Wear OS
Rekhoda ukuzilolonga kwi-Android
Ukuba sele unayo iGoogle Fit efakwe kwifowuni yakho ye-Android, kufuneka sivule isicelo. Kulabo bangenayo okwangoku, sikushiya apha ngezantsi ngekhonkco lalo lokukhuphela, ukuze ulibambe. Ngayiphi na imeko, sakube sifakelwe kwifowuni yakho, kufuneka siqhubeke nokuvula usetyenziso.
IGoogle Fit: Umsebenzi weLog
Nje ukuba sivule isicelo, kufuneka sijonge ngasekunene kwayo. Apho sifumana iqhosha elinophawu "+". Kuya kufuneka ucofe kuyo kwaye uvule uhlobo lwemenyu. Siza kubona ukuba enye yeenketho esizifumanayo kukurejista uqeqesho ». Siza kucofa kuyo.
Ngokucofa eli qhosha, IGoogle Fit isibonisa uluhlu olukhulu lwezemidlalo apha ngezantsi. Kuya kufuneka sikhethe leyo siza kuyenza ngalo mzuzu, kolu luhlu luboniswe kwi-app. Nje ukuba siyikhethe, konke ekufuneka sikwenzile kukucofa ku "qala uqeqesho" mzuzu siqala ukwenza ezemidlalo. Elula njengaleyo.
Xa siziqeqesha, ukuba sifuna ukuthatha ikhefu okanye siza kugqiba, kufuneka sikubonise oko emnxebeni. Siza kuyibona loo nto IGoogle Fit isinika iqhosha lokuphumla, ukuba sithatha ikhefu elifutshane, kwaye enye siyeke okanye ukugqiba, esiya kuthi sikusebenzise xa sigqiba olu qeqesho. Ekugqibeleni, yonke imisebenzi ebonakalayo esiyenzileyo ngeli xesha iya kurekhodwa kwisicelo.
Rekhoda ukuzilolonga kwi-Wear OS
Ukuba uyayifuna kukurekhoda uqeqesho lwakho kuGoogle Fit kwiwotshi yakho nge-Wear OS, inkqubo ayinzima. Kwakhona, kufuneka sifake isicelo ekubukeni. Ke kufuneka siye kwiVenkile yokuDlala siyikhuphele. Ungasebenzisa ikhonkco esele silinike ngaphezulu. Nje ukuba ufake isicelo kwi-smartwatch yakho, siyayivula.
Ngaphakathi kuGoogle Fit kufuneka sijonge ukhetho loqeqesho. Siza kuyifumana xa sivula usetyenziso kwewotshi, ngenxa yoko akuyi kuba nzima kuthi ukufikelela kuyo. Xa usilayida, sifumana kwakhona uluhlu lwemidlalo esiboniswa sisicelo. Kufuneka nje sikhethe umdlalo esiza kuwuqhuba ngalo mzuzu.
Okulandelayo, sikunika ukuba uqale uqeqesho, oluza kubonakala phezulu kwesikrini sewotshi. Cofa kule ndlela xa sikulungele ukuqala. Ke, IGoogle Fit iya kuqala ukurekhoda umsebenzi esiwenzayo. Njengangaphambili, singanqumama okanye siyeke uqeqesho nanini na sifuna. Kwaye konke esikwenzileyo ngeli xesha kuya kubhalwa phantsi.
Kwi-app, umsebenzi wethu womzimba ngexesha loqeqesho uya kurekhodwa. Siza kuba nedatha ngexesha esilisebenzisileyo, iikhalori ezitshisiweyo, ukubetha kwentliziyo ngexesha loqeqesho, umgama ohanjiweyo (kuxhomekeke kwimisebenzi). Ke kuyakuba lula kakhulu kuthi ukulawula imisebenzi yethu kunye nemeko yomzimba ngalo lonke ixesha ngeGoogle Fit.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ungarekhoda njani ukuzilolonga ngeGoogle Fit
ITheward: Amabhaso ngeyona midlalo mihle yeselfowuni kunye nokusetyenziswa eSpain ngo-2018